धन्सार भत्किंदा एक जना सहित ६ बाख्रा पुरिए - फोटो फिचर
अष्ट्रेलियामा कार दुर्घटनामा परि दुई नेपालीको मृत्यु
कर अनि कर को अवस्था
धन्सार भत्किंदा एक जना सहित ६ बाख्रा पुरिए – फोटो फिचर
जनतासँग उठाएको कर जनताकै लागी: एउटा नमुना कदम
दोहोरियो ट्याक्टर दुर्घटना
सत्य तथ्य सुचना, हाम्राे चाहना
१२ श्रावण २०७६, आईतवार १०:१४ admin	0 Comments
स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. – १० हलहले स्थित आईतबार बिहान करिब ८:२५ बजे तिर सिद्द कुमार गुरूङको धँन्सार एक्कासी भत्किंदा उहाँका श्रीमती भाइमति गुरूङ र ६ वटा बाख्रा पुरिएका थिए । यसरी पुरिएका भाइमति गुरूङलाई गाउँका युवा समूह / आमा समूह / बाबा समुहले घाइते अवस्थामा उद्दार गरेका थिए । उहाँको आँखा माथि चोट लागेको थियो । उहाँलाई स्याङ्जाबाट पोखराको लागि रिफर गरेका थिए । अहिले उनी पोखरामा उपचारत क्रममा हुनुहुन्छ ।
उहाँको उद्दारमा युवाहरूको क्वीक रेस्पोन्स रहेको थियो । उहाँलाई सकुशल उद्दारमा खटिइ काम गरे । धान्सरमा पुरिएका ६ वटा बाख्रा मध्ये ३ वटा जिवित उद्दार गरेको थियो ।
← जनतासँग उठाएको कर जनताकै लागी: एउटा नमुना कदम
कर अनि कर को अवस्था →
Royal Enfield Thunderbird X in Nepal : Features
२८ चैत्र २०७५, बिहीबार १२:१५ admin 0
२५ चैत्र २०७५, सोमबार २०:०० admin 0
Biruwa (बिरुवामा ७ दिने सिप विकास तालिम सम्पन्न)
४ बैशाख २०७६, बुधबार १७:३७ admin 0
Search / खोजी गर्नुहोस्
१३ श्रावण २०७६, सोमबार १६:०४ admin 0
अष्ट्रेलियामा दुई नेपालिको मृत्यु । स्याङ्जा वालिङकी समिक्षा सुवेदी र स्याङ्जाकै गोपाल भण्डारीको दुःखद निधन भयो । अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरा
१२ श्रावण २०७६, आईतवार ११:०८ admin 0
१२ श्रावण २०७६, आईतवार १०:१४ admin 0
१० श्रावण २०७६, शुक्रबार १०:५९ admin 0
नयाँ विरुवा डट कम (nayabiruwa.com) एउटा अनलाईन पत्रिका हो । विश्वले प्रविधिमा छलाङ्ग मार्दै गर्दा, सुचना सञ्चार क्षेत्रमा पनि डिजीटलाईज हुँदै गएको छ । अबका पुस्ताहरुमा पत्र, पत्रिका बाट भन्दा अनलाईन माध्यम मोबाइल तथा कम्प्युटर बाट सुचना तथा जानकारी छिटो, छरिटो रुपमा प्रसारण हुने हुँदा यस नयाँ विरुवा डट कम को जन्म भएको हो ।
“Naya Biruwa” is our News & Media Website
समाचार तथा लेख/रचना काे लागि
Categories Select Category Business (1) Entertainment (1) Gallery (1) Health (2) How-To- (2) Information e-Board (3) Latest (7) News (18) Politics (1) Sports (4) Technology (8) लेख/रचना (4) विचार/ब्लग (2)
Copyright © 2020 नयाँ विरुवा. All rights reserved.